Wararka | EPONT Jack
Si aad u ogaato qaabdhismeedka jaakadaha alxanka ee caadiga ah iyo habka dayactirka.Si aad si fiican u isticmaasho jaakadaha, way fiicantahay in la ogaado qaab dhismeedka jaakadaha alxanka caadiga ah iyo aqoonta kale.
Khadka wax soo saarka sagxada Haydarooliga.Waxaan nahay Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. -- EPONT, alaabadayada waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 wadan sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo iwm. Macaamiishayada waxaa ku jira kuwo badan. Macaamiisha OEM ee ku takhasusay tareennada, baabuurta, fargeeto iyo mishiinnada dhismaha, waxaanu hore ula yeelanay iskaashi in ka badan 10 ka mid ah shirkadaha 500 ee ugu sarreeya adduunka oo ah mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee Shiinaha
Soodejinaya weelka macaamiisha habeen iyo maalin. wuxuu leeyahay nidaam tayo wanaagsan oo lagu xakameynayo iyo nidaamkiisa maaraynta si loo hubiyo tayada alaabta.
Kulan ka dhacay Carwada
Kulan ka dhacay Carwada.Bukaan-socodka ayaa awood u leh inay ka faa'iidaystaan ​​tayada kala duwan ee alaabtani bixiso - waxqabadka xasilloon, khafiif ah, iyo saxnaanta.